स्वास्थ्य पेज » जमुनाह नाकामा १० जनाको एन्टिजेन जाँच, रिपोर्ट नेगेटिभ, गड्डाचौकी र गौरीफन्टामा भेटिए पोजेटिभ जमुनाह नाकामा १० जनाको एन्टिजेन जाँच, रिपोर्ट नेगेटिभ, गड्डाचौकी र गौरीफन्टामा भेटिए पोजेटिभ – स्वास्थ्य पेज
जमुनाह नाकामा १० जनाको एन्टिजेन जाँच, रिपोर्ट नेगेटिभ, गड्डाचौकी र गौरीफन्टामा भेटिए पोजेटिभ
भारतबाट आएका नेपालीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै भारतमा फैलिएको नयाँ ‘डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ नेपालमा पनि भित्रिएको आशंका गरिएको छ ।
नेपालगन्जः भारतमा दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस देखिएसँगै नेपालमा पनि भित्रिएको आशंका गरिएको छ। भारतबाट आएका नेपालीहरुमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै भारतमा फैलिएको नयाँ ‘डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ नेपालमा पनि भित्रिएको आशंका गरिएको छ । यद्यपी त्यसको पुष्टि हुन भने बाँकी छ । संक्रमितको ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गरिने भएको छ ।
भारतको सीमानाकाबाट प्रवेश गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षणमा सरकारले कडाई गर्दै चेकजाँच बढाएको छ। नेपालगन्जको जमुनाह नाकामा हिंजो विहीबारसम्म १० जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ । ति सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रामबहादुर चन्दले बताउनुभयो । भारतबाट आएका १४ जनामा भने संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
उनीहरु‘गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाका भएर स्वदेश फर्किदै थिए । उनीहरुमा हल्का ज्वरो, रुघाखोकी लगायतको समस्या देखिएपछि एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राखिएको छ ।
सीमानाकामा चेकजाँचका क्रममा संक्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिमा नयाँ भेरियन्ट हो कि होइन भनेर पुष्टि गर्न राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ को काम गरिने छ ।
कोरोना भाइरस कुन देशबाट आयोरु नेपालमा देखिएको भाइरस अन्य देशसँग मिल्छ–मिल्दैनर ? भाइरसमा के-के फरक छ ? भन्ने जानकारीका लागि कोरोना संक्रमितको ‘जिन सिक्वेन्सिङ’ गरिन्छ।